SVILUPPARE PUNTI CHIAVE DI FORZAUna volta che hai - Page 106 of 174 - https://themummichogblog.com
जोरदार प्रमुख बुँदाहरू विकसित
एक पटक तपाईं आफ्नो सन्देश योजना गर्नुभएको छ, तपाईंको उद्देश्य, तपाईं आफ्नो प्रस्तुति को मासु र आलु निर्धारण स्थिति हो, आफ्नो लक्ष्य सधैं आफ्नो दर्शक को ज्ञान र व्यवहार बदलाव हुनुको साथ विकास र दर्शक बुझ्छु।
“म के भन्छन्?” तपाईं एक प्रस्तुति योजना गर्दा त्यो सधैं राम्रो प्रश्न हो। तपाईं मनमा ठूलो शीर्ष स्तर सन्देश, शेयर गर्न ठूलो विचार हुन सक्छ, तर तपाईं वास्तवमा के भन्छन्?
आफ्नो प्रस्तुति को शरीर को लागि सामग्री विकास गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका यो brainstorm छ। सम्झना, तपाईं पहिले नै तपाईं आफ्नो मनमा वरिपरि सामग्री घुम्ने धेरै छ त, दर्शक विश्लेषण, तिनीहरूले जान्नु आवश्यक बारेमा सोच साथै तिनीहरूले सोध्न प्रश्नहरू द्वारा धेरै सिके। अब हामी बस यसलाई प्राप्त र यो संगठित प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
परिचय, शरीर र निष्कर्ष: त्यहाँ प्रभावकारी प्रस्तुति तीन भागहरु छन्। हामी हाम्रो पहिलो सबैभन्दा प्रमुख सशक्त अंक बाहिर प्राप्त गर्न शरीर सुरु। त्यो हामीलाई धेरै शक्तिशाली परिचय र निष्कर्षमा सिर्जना गर्न त डोऱ्याउनुहुनेछ।
यहाँ प्रयास गर्न केही विमर्श विधिहरू छन्:
सबै विचार मा आफ्नो टाउको बाहिर प्राप्त पोस्ट-आफ्नो, यसलाई किबोर्ड मा ट्याप गर्नुहोस्, वा आफ्नो स्मार्टफोन-जो तपाईं को लागि सबै भन्दा सहज छ तपाईंको औंठी प्रयोग गर्नुहोस्।
त्यसपछि यो लेखन तपाईं छिटो कुरा र आफ्नो आवाज रेकर्ड।
माथि छिटो तपाईं रूपमा, तपाईँले धेरै विचार रूपमा साथ आउँछन्।
तपाईंको विचार न्याय छैन। उनीहरू आए रूपमा बस तिनीहरूलाई रेकर्ड। तपाईं लाटा कुराहरू भन्दै चिन्तित हुनुहुन्छ भने तपाईंले सबै केही भन्दै अन्त हुन सक्छ।
के तपाईं बन्द आधार छौं, र तपाईं आफ्नो स्थिति रक्षा गर्न साठी सेकेन्ड छ सोच्छ व्यक्तिलाई वाद हुनुहुन्छ कल्पना गर्नुहोस्। आफैलाई रेकर्ड गर्नुहोस्।
कहीं सुरु गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो प्रस्तुति को सुरुमा सुरु गर्न छैन।
मस्तिष्क वैज्ञानिकहरू अब नयाँ अंतर्दृष्टि यस्ता क्षण आउन भनेर थाह छ। को “अहा!” क्षण हामी अक्सर अनुभव एक “गामा स्पाइक” -A को neocortex, मस्तिष्क गरेको रचनात्मकता केन्द्र मार्फत गामा-लहर गतिविधिको अचानक फ्लैश सँगसँगै छ। यी गामा spikes सामान्यतया जब तपाईं समस्या र बस आसपास मुक्त-एसोसिएट को “गरौं जाने”, अनियमित मा हुन।  त्यो कसरी तीव्र विमर्श कार्य गर्दछ। सबै ठूलो जानकारी भेला तपाईं पहिले नै गरे, तपाईंको मस्तिष्क synthesize र बाहिर-ठीक तपाईं आफ्नो उद्देश्य समर्थन गर्न के आवश्यक छ तपाईंको उत्तम विचार प्राप्त गर्न पाकेको छ।
आफ्नो नयाँ प्रस्तुति को लागि, Tad तेजी लेख्नुहोस् विचार गर्ने छनौट पोस्ट-यो टिप्पणी। यो दृष्टिकोण को फाइदा उहाँले समूह सकिनँ र टिप्पणीहरू गर्दा उहाँले समाप्त विमर्श व्यवस्था छ। अर्को पृष्ठमा Tad नोट हेर्नुहोस्।
अब Tad गरेको काम यी विचारहरू केही संरचना दिन थियो।
पहिलो, उहाँले तिनीहरूलाई तार्किक समूह मा राख्नु र प्रत्येक समूहमा एक लेबल दिनुभयो।
डाटा सुरु, त्यो डाटा पायो कसरी भन्छु, र त्यसपछि डाटा व्याख्या (अर्को पृष्ठमा आफ्नो अन्तिम आदेश हेर्नुहोस्): त्यसपछि उहाँले तिनलाई तार्किक देखिन्थ्यो कि क्रममा प्रत्येक समूह मा विचार प्रबन्ध मिलाए।
मा अन्तिम Tad आफ्नो विचार संगठित थियो, र यो काम गर्न मात्र आधा घण्टा बारेमा उहाँलाई लगे। विवरण प्राविधिक भए तापनि प्रस्तुति सरल हुनेछ: उहाँको नयाँ दौड सुट कुनै पनि अन्य सुट भन्दा छिटो थियो, त्यो थियो प्रमाणित सक्छ
यसलाई छिटो थियो किन छिटो, र उहाँले तपाईंलाई बताउन सकेन। यो आफ्नो सबै श्रोताहरू आफ्नो प्रतिमान बदलाव आवश्यक थियो। केहि थप मात्र, उनको दिमाग अव्यवस्था थियो डाटा को प्रभाव मड्डी र निर्णय ढिलाइ।
यो आफैलाई प्रयास गर्नुहोस्। तपाईंको आफ्नै विचार र Brainstorm त्यसपछि समूह तिनीहरूलाई। तपाईंको विचार बीच कनेक्शन तपाईं कहाँ देख्नुहुन्छ? गोली मार कुनै अधिक तीन मुख्य समूहहरूको लागि, त्यसपछि प्रत्येक समूह भित्र क्रममा विचार व्यवस्था। यी समूहहरू आफ्नो प्रस्तुति को मुख्य विषय हुनेछ।
तीन गरेको को आकर्षण
Tad अप विचार को तीन समूहहरूसँग किन आयो? किन चार वा पाँच वा छ?
उहाँले स्मार्ट किनभने। उहाँले शक्ति थाह “तीन।” मनोवैज्ञानिक तपाईं कसैले सम्भ्काउनु गर्न प्रयास गर्दा, तीन दावी प्रेरक छन्, कि फेला, दुई पर्याप्त अक्सर छन्, तर चार धेरै छन्। प्रोफेसर सुजनलाई बी Shu र कर्ट ए कार्लसन भन्नु, “थप दावी राम्रो चौथो दावी सम्म, जो समयमा [श्रोताहरू] शंका सबै दाबी हेर्नुहोस्।” शोधकर्ताओं यो प्रभाव “, तीन को आकर्षण” कल र यो औसत व्यक्ति अल्पकालीन स्मृति मा ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ कति संग गर्न केही छ शक। 
पाठ्यक्रम, ठूलो communicators सधैं तीन को आकर्षण बारे ज्ञात छ; तिनीहरूले अक्सर वर्तमान तीन विचारै, तीन मुख्य बुँदा वा तीन निष्कर्ष दावी समर्थन गर्न किन हो। लिंकन “मानिसहरूले, मान्छे को सरकार, र मान्छे को लागि।” को कुरा फ्रान्सेली को कुरा “स्वतन्त्रता, समानता र fraternity।” सीजर “म देख्यो, म जिते, आए।”, भन्नुभयो (सूचना हामी बस तपाईंले तीन उदाहरण दिनुभयो।)
“कुनै एक तीन अंक भन्दा बढी सम्झना गर्न सक्नुहुन्छ।”
कथा, गीतहरू, र Jokes threes ( “तीन भएकालाई एक पल्ट मा हिंड्न …”) को भरिएका छन्। Naturalist डायन Ackerman यो ढाँचा मा झल्काउँछ: “हामी obsessively हाम्रो आफ्नै, यस्तो बिहान दिउँसो र रात रूपमा तिकडी, प्रायः सिर्जना गर्न ढाँचाको प्रेम त हुनुहुन्छ; Macbeth तीन अजीब बहिनीहरू; तीन बुद्धिमान् पुरुष; तयार, सेट, जाने; एक सोनाटा तीन-भाग फाराम; को जिन्न तीन इच्छा दिंदा गर्नुपर्छ; साना, मध्यम र ठूलो; ABCs; Goldilocks र तीन भालू; तीन साना सुँगुरहरु; र यति मा। तीन विकल्प हाम्रो ढाँचा जस्तो देखिन्छ। “
nascondere il motivo per il vostro autorevole verd
Big Ben Interni 223225 Naxxar Road Birkirkara Malt